192.168.8.1 - Inona ny adiresy IP default?
An Adiresy Internet Protocol dia tag isa natokana ho an'ny fitaovana rehetra mifandraika amin'ny tambajotra PC izay mampiasa Internet Protocol amin'ny fampitana. Ny adiresy IP dia manome tanjona lehibe roa: ny fifandraisana amin'ny tambajotra na ny famantarana ny mpampiantrano sy ny toerana anaovana azy.
Ny adiresy IP nomena ny PC tamin'ny tamba-jotra na ny adiresy IP natokana ho an'ny gadget tambajotran'ilay mpivarotra vokatra. Ny fitaovam-pifandraisana dia napetraka amin'ny adiresy IP misy anao manokana; Ohatra, mazàna ny router Linksys dia omena amin'ny adiresy IP 192.168. 1.1
Raha te-handeha amin'ny toerana iray eo amin'izao tontolo izao ianao, dia mangataka ny adiresy ary mametraka azy amin'ny GPS. Rehefa maniry ny handeha amin'ny toerana amin'ny Internet ianao, dia mangataka ny adiresy aza, ary manoratra azy ao anaty bara URL an'ny tranokala tianao indrindra.
Ny fomba hitadiavana ny adiresy IP default amin'ny WIFI dia omena etsy ambany:
Ny mpanamboatra ny router rehetra dia manana adiresy IP router tsy misy fampiasa hita maso eo am-pototry ny hardware router. Raha tsy voamarika anarana eo izy, dia azonao atao ny mahazo azy amin'ny rakitra na ny boky misy ny router aorian'ny nividiananao azy.
Raha manomana anao amin'ny router ny ISP dia hilaza aminao ny adiresy IP sy ny ID hidiranao amin'ny router ary miditra amin'ny Internet.
Fomba hahitana mpampiasa sy tenimiafin'ny router mahazatra?
Ny ID fidirana default dia azo tratrarina avy amin'ny boky torolalana router izay tonga miaraka amin'ny router aorian'ny nividiananao sy nampifandraisanao azy voalohany.
Matetika, ho an'ny ankamaroan'ny router, ny ID default dia sady "admin" miampy "admin". Saingy, mety hiova ireo famantarana ireo dia miankina amin'ny mpanamboatra ny router.
raha very ny boky torolàlana ianao dia mety hisy mahita ireo kara-panondro miafina avy aminy avy hatrany ny fitaovana entina router satria hatao pirinty eo an-damosin'ny router tsirairay avy ireo.
Rehefa mampiasa ny router dia azontsika atao ny manova ny karatra amin'ny fotoana rehetra hisorohana ny fidirana amin'ny tambajotra tsy ara-dalàna. Izany dia hatao mba hamerenanao ny router & ampidiro passkey vaovao araka ny safidy.
Ny router reset dia mitazona ny lakilen'ny reset ho an'ny segondra vitsivitsy ary ny router dia haverina amin'ny toerany. Ankehitriny, azonao atao ny manova ny toerana misy anao ary mametraka ny IDS fidinao izay tianao.
Ny fitaovan'ny tambajotra dia miorina amin'ny adiresy IP misy anao; Ohatra, ny router Linksys dia matetika no nomena ny adiresy IP an'ny 192.168.1.1. Ny adiresy IP default dia voatazona tsy simba amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa izay mbola azo ovaina mba hahamety ny rafitry ny tambajotra sarotra kokoa. Tsidiho ny adiresy vavahady sy adiresy IP.
Ny adiresy IP Router IP default dia manondro adiresy IP iray manokana izay ampifandraisinao ary manandrana miditra. Ilaina amin'ny orinasa na tambajotran-trano.
The adiresy IP misy anao Ny router dia zava-dehibe hivelatra amin'ny interface web router hahatafiditra ny tontonana fanaraha-maso sy ny fikirakirana ny tambajotra. Azonao atao ny mahazo miditra amin'ny sehatry ny tambajotran'ny router aorian'ny manoratra an'ity adiresy ity amin'ny tranokala amin'ny tranokala adiresy.
Sokajy Glossary amin'ny Internet Post Fikarohana